Maxaad ka Taqaanaa 7 Masuul Ee Caawa ku Tartamaya Xilka Raysal Wasaaraha Itoobiya.(Akhiro) | Awdalmedia.com
Maxaad ka Taqaanaa 7 Masuul Ee Caawa ku Tartamaya Xilka Raysal Wasaaraha Itoobiya.(Akhiro)
Sat 17 March 2018.
Isbahaysiga talada haya ee Itoobiya ayaa la filayaa in ay goor dhow doortaan hogaamiyohooda cusub ee noqon doona ra'isalwasaraha wadanka,kaasoo wajihi doona carqabadaha dalkaasi ka taagan iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo rabshada wadata.
Xisbiga is bahaysiga EPRDF ayaa ka koobanyahay afar xisbi siyaasadeed oo ku saleeysan qaar ka mid ah qowmiyadaha dega itoobiya,balse khilaaf soo kala dhex galay isbahaysigaan ayaa adkeeyay in la saadaaliyo qofkii uu noqon lahaa ra'isalwasaaraha xiga ee dalka itoobiya.
47 jirkan ayaa ku dhashay kuna soo barbaaray bariga Welega ee gobolka oromiya,isagoo bishiii Decembar ee la soo dhaafay aad u cambaareeyay dilka loo geeysanayo dadka dibedbaxayaasha ah. waxa uu sidoo kale ogolaaday in uu wadahal la yeesho ururada mucaaradaka ah.
Waa siyaasi caaqil ah sidoo kalana aqoontiisu sarreyso,waxuuna ku dhashay caasimadda Agaro ee gobolka Oromiya waxa uuna ka soo jeedaa qooys isugu jira muslimiin iyo masiixiyiin.
42 jirkan ayaa xisbiga OPDO ku biiray dabayaaaqadii Sideetameeyadii,kaas oo la soo shaqeeyay Milatariga kana gaaray jagada Colonel.
markii isbaheysiga EPRDF uu la wareegay talada wadanka waxa loo magaacabay ku xigeenka Hay'adda Sirdoonka ee Qaranka,isagoo haatan ah gudoomiyaha xisbiga TPLF iyo wasiirka warfaafinta.
Waa ra'isalwasaare ku xigeenka ee wadankaItoobiya isagoo xisbiga is bahaysiga ee EPRDF ku biiray kadib markiii uu dhameeyay jaamacadda, sanado yar kadibna waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka gobolka Amxaarada.
Waxa uu dhashay lixdameeydii waxa uuna sanado badan soo ahaa Taliyaha Booliska ee Federaalka,dhamaadkii sanadkii 2000 ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka gaadidka jagadaas oo uu hayay muddo afar sanadood ah.
Waa wasiirka difaaca ee itoobiya waxa uu inta badan ka soo muuqdaa warbaahinada marka ay dowladda ay ka hadleeyso xaaladaha amarka degdegga ah ee uu wadanka ku jiro.
Sidoo kale waa xubin ka tirsan xisbiga SEPDM oo ah xisbiga uu iska casilay ra'isalwasaarahii hore waxaana loo magaacabay gudoomiye ku xigaanka xisbiga
Waa xoghayaha isbahaysiga EPRDF. waxa uu soo noqday wasiirka Waxbarashada ee Itoobiya,isgoo dhawaan loo doortay gudoomiyaha cusub ee xisbiga SEPDM kaasoo bedelay ra'isalwasaarihii xilka iska casilay.
Dadka qaar ayaa sheegaya doorashada loo doortay in uu noqdo gudoomiyaha xisbiga SEPDM ayaa waxa ay gogol xaar u tahyay suurtagalnimada ah in uu noqdo ra'isulwasaaraha xiga ee itoobiya.
Sikastaba ha ahaatee Xisboiga Isabahaysiga ayaa talada dalka ka taliya tan 1991 kadib markii ay burburtay dowaladdi mingiste ee milatariga ahayd.